काठमाडौं – कम्युनिस्ट आन्दोलनको सार्थकता पुष्टि गर्न तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले गरेका भाषण हालसम्म पनि चर्चामा आउँछन् । कम्युनिस्ट सत्तामा पुगेर विलासी व्यवहार देखाउने नेता र युवाका लागि स्व. मदन भण्डारीका भाषणा प्रेरणाका स्रोत पनि हुन् ।
उनले भनेका थिए, ‘यहाँले आफ्नो घरमा हात्ती पाल्दाखेरि धेरै घाँस, धेरै भुस, धेरै उसलाई फिडिङ चाहिन्छ । तर एउटा बोको पाल्नुभयो भने त्यो बोकोलाई थोरै घाँसले पुग्ने थियो । यसअर्थमा एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने उसले १५–२० हजारमा त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको बराबरी तलबमा काम चल्थ्यो होला । तर यो अभिसामन्ती अभिजात्य शैलीमा बाँचेको दरबारलाई अहिले त्यति खर्चले पुग्नेवाला छैन ।
नेता मदन भण्डारीले त्यतिबेला देखेको सपना पूरा भएको छ, उनकै पत्नी विद्यादेवी भण्डारी जननिर्वाचित राष्ट्रपति बनेकी छन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीले गरिरहेको खर्च, व्यवहार र शैली मितव्ययी र जनप्रिय छ त ? यो जनजाहेर विषय छ । अर्का प्रश्न जन्मिन्छ – मदन भण्डारीले भनेझै राष्ट्रपतिलाई पाल्नु हात्ती पालेझै छ कि बोका पालेझै ?
सुन्नुस् मदन भण्डारीको भाषण :-
माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको शुरूवात नहुँदै मदन भण्डारीको हत्या भयो । २०५२ सालबाट युद्धको शुरूवात गरेको माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन र जनआन्दोलनको जगमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सरकार मुख्य पदमा नेकपाकै नेता पुगेका छन् ।
मदन भण्डारीको मजदूर र किसान पक्षीय विचारको जगमा उभिएको पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएकी राष्ट्रपति भण्डारी सेवासुविधा र कार्यशैलीका कारण विवादमा तानिने गरेकी छन् । शितलनिवास बाहिर आवतजावत गर्दा सडक र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा जाँदा विमानस्थल नै ठप्प हुने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणदेखि स्वदेशी/विदेशी नागरिक आजित छन् । हिजो राजाको कार्यशैलीविरुद्ध आवाज उठाएका स्व. मदन भण्डारी पत्नी विद्या भण्डारी हाल राजाकै कार्यशैलीमा उत्रिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मदन भण्डारीले भनेका थिए, ‘हाम्रो मुलुकमा चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न चाहिँ नपर्ने र राजाकै छोरा राष्ट्रपतिजस्तो हुन्छन् भनेपनि त्यस्तो कुरालाई आपत्ति मान्नुपर्ने केही जरुरी हुँदैन । यसकारणले कि यद्यपि परम्परा खालको एउटा अभिजात्य र त्यो अभिजात्य शैलीलाई कायम राख्दा मुलुकले अलिक बढ्ता खर्च व्यहोर्नुपर्ला ।’ राजा राष्ट्रपतिजस्तो भएपनि हुने बताउने मदन भण्डारीकै पार्टीका नेता राजाजस्तो भएको आरोप लाग्नु चाहिँ गम्भीर अवस्था बनेको छ ।
स्व. नेता भण्डारीले आफ्नो जीवनको अन्तिमसम्म उनकै भाषामा ‘अभिजात्य वर्ग’ र विलासी प्रवृत्तिविरुद्ध लडिरहे । तर उनकै आदर्शबाट उदाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज मदन भण्डारीको आदर्शलाई किन बिर्सिइन् ? यो प्रश्न जीवितै छ ।